२०१ best को सर्वश्रेष्ठ पाँच Android एन्ड स्मार्टफोन | Androidsis
२०१ of को सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड वन स्मार्टफोनहरू
ईडर फेरेनो | | एन्ड्रोइड उपकरणहरू
एन्ड्रोइड वन बर्षको महान नायकहरू मध्ये एक हो। २०१ 2018 मा, अधिक फोनहरू अपरेटि system प्रणालीको यो संस्करणको साथ पहिलेभन्दा झन्डै १ arrived कुलमा आएका छन्। केहि चीज जुन यसको लागि ठूलो प्रोत्साहन भएको छ, विशेष गरी टेलिफोनी बजारमा यसको जटिल सुरुवात पछि, जस्तो हामीले तपाईंलाई पहिले नै भनिसकेका छौं.
अपरेटिंग सिस्टम अपडेटको दुई वर्ष, सबै अफवाहहरूको बावजुद तिनीहरू परिवर्तन हुनेछैनन्, एन्ड्रोइड वन को एक महान लाभ हो। केहि जुन अपरेटिंग प्रणाली मा प्रयोगकर्ताहरू जीत। हामीले भनेझैं, अपरेटिंग प्रणालीको यो संस्करणको साथ कुल पन्ध्र नयाँ स्मार्टफोनहरू आएका छन्। ती मध्ये धेरै विचार गर्न को लागी छन्।
त्यसकारण, तल हामी तपाईंलाई एन्ड्रोइड वनको साथ सब भन्दा राम्रो फोनहरू साथ छोड्छौं जुन २०१ 2018 भरि पसलहरूमा शुरू भयो। मोडेलहरूले देखाउँदछ कि अपरेटिंग सिस्टमको यो संस्करण धेरै जीवित छ र एन्ड्रोइड बजारमा धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सबैलाई भेट्न तयार हुनुहुन्छ?
1 Xiaomi MyXXUMX
2 जियाओमी मेरो एक्एक्सएनएमएक्स लाइट
3 मोटो वन
4 BQ एक्वेरिस X2 प्रो
शाओमीले यस बर्ष हामीलाई छोडेको छ तपाईंको एन्ड्रोइड वनको साथ फोनको दोस्रो पुस्ता। यो नयाँ पीढी यस Xiaomi Mi A2 को अगुवाईमा छ, उच्च-अन्त दायरा भित्र सबै भन्दा प्रख्यात मोडेलहरू मध्ये एक। त्यसैले यो खातालाई लिनको लागि एक नमूना हो, यसका साथै अघिल्लो जेनेरेसनको तुलनामा क्वालिटीमा छलांग हुनुको अलावा। तपाईं यसको पूर्ण विवरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो लिंक.
यो मध्य दायराले हामीलाई निशान बिना डिजाइनको साथ छोड्छ, केहि फोटोग्राफी मा ध्यान केन्द्रित संग राम्रो चश्मा, र अनुकूलन तह वा अनावश्यक अनुप्रयोगहरूको अपरेटि system प्रणालीको यो संस्करण। विचार गर्न एक राम्रो संयोजन, र त्यो पहिलो पुस्ता जस्तै, यो बजार मा धेरै राम्रो काम गरीरहेको छ।
शाओमी मी ए2मा रुचि छ? तपाईं अब यो खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, सीमित समयको लागिa227 .XNUMXeयुरो। उपलब्ध छ यो लिंक.
जियाओमी मेरो एक्एक्सएनएमएक्स लाइट
उपरोक्त उपकरणको साथ, चिनियाँ ब्रान्डले यस शाओमी मी ए2लाइटको सुरुवात गर्‍यो। यो एक फोन हो जुन हामी गत वर्षको एमआई ए 1 को साँचो उत्तराधिकारीको रूपमा देख्न सक्छौं। विनिर्देशहरू तिनीहरू थोरै सुधार गरिएको छ, ब्याट्रीमा विशेष ध्यान दिएर, अहिले उच्च क्षमताको साथ, तर एन्ड्रोइड वन राख्दै।
यो फोन यसको स्क्रीन मा निशान संग आएको छ, बर्षको एक प्रचलनहरू, जुन धेरै छिटो विकसित भएको छ। यो मध्य दायरा भित्रको अर्को राम्रो मोडेल हो, अघिल्लो भन्दा केही सरल, तर समान रूपले धेरै चाखलाग्दो। मूल्यको हिसाबले केही बढी पहुँचयोग्य हुनुको साथै।
तपाईं एक पी मा यो Xiaomi Mi A2 लाइट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ१ 185,70 XNUMX० युरो कडा। तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।
मोटोरोला पछिल्लो ब्रान्ड मध्ये एक हो जुन हामीलाई एन्ड्रोइड वन फोनको साथ छोडियो बजारमा। अपरेटिंग प्रणालीको यस संस्करणमा सामान्य रूपमा, यो एक मोडल हो जुन मध्य-दायरामा पुग्छ। त्यसैले यो हामीले बोलेका यी पहिलेका उपकरणहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हो। मध्य दायरा क्षेत्र हो जसमा मोटोरोला सबैभन्दा सफल छ।
तसर्थ, तिनीहरू यो सफलता एक मोडेलमा लागू गर्न चाहान्छन् कि राम्रो विवरणहरू संयोजन गर्दछ, जुन तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मध्य-दायरा ब्रान्डबाट, Android One भएको फाइदाको साथ एक अपरेटिंग प्रणाली को रूप मा। त्यसोभए यो एक यस्तो मोडेल हो जुन कम्पनीको क्याटलगमा अन्य उपकरणहरू अघि अपडेटहरू प्राप्त गर्दछ।
यो उपकरण हालaलाई उपलब्ध छ अमेजनमा २..269० युरो, १०% छुटमा धन्यवाद। तिमी सक्छौ यहाँ किन्नुहोस्।
BQ एक्वेरिस X2 प्रो
ब्रान्ड युरोपमा एन्ड्रोइड वन फोन सुरू गर्ने पहिलो हो। यद्यपि यो ठूलो सफलता थिएन, तर तिनीहरूले अपरेटिंग प्रणालीको यस संस्करणमा उनीहरूको केही मोडेलमा शर्त राखेका छन। यस वर्ष उनीहरूले हामीलाई यस दायरामा दुई नयाँ उपकरणहरू छोडेका छन् जस बीच यो एक्वेरिस एक्स २ प्रो छ, जसमा तपाईं यसको विशिष्टताहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो लिंक.
यो एक फोन हो जुन भेटघाट भन्दा बढी छ हामी आज मध्य-दायरा मोडेलबाट के आशा गर्न सक्छौं। राम्रो विनिर्देशन, एक डबल रियर क्यामेराको साथ, पातलो फ्रेमहरू सहितको स्क्रीन, र एन्ड्रोइड वनलाई द्रुत अपडेटहरू धन्यवाद। BQ जस्ता ब्रान्डको ग्यारेन्टी हुनुको साथै।
यो फोन हालaबाट खरीद गर्न सकिन्छ 349,33 .XNUMXeयुरो अमेजन मा पदोन्नति मा, यहाँ उपलब्ध छ.
नोकिया .8.1.१ स्टोरहरूमा हिट गर्ने अन्तिम मोडेलमध्ये एक हो। यो ब्रान्ड फोन, यस महिनाको सुरूमा प्रस्तुत गरियो, प्रीमियम मध्य दायरा को क्षेत्र मा पुग्छ, जुन बर्षको नायक को अर्को भएको छ। नोकिया एक ब्रान्ड हो जुन उनीहरूको फोनमा निजीकरण तह प्रयोग नगर्ने विकल्प छन। थप रूपमा, वर्षको सुरूमा उनीहरूले पहिले नै टिप्पणी गर्यो कि तिनीहरूको फोनहरू सँधै एन्ड्रोइड वन प्रयोग गर्दछन्।
यो फोन बिभिन्न नामबाट परिचित छ। यो X7 को रूप मा चीन मा प्रस्तुत गरिएको थियो, र यूरोप मा यो नोकिया Plus प्लस वा नोकिया .7.१ को रूपमा परिचित छ त्यसो भए यो केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि भ्रमित हुन सक्छ। तर यो एक राम्रो फोन हो, जुन यो प्रीमियम मध्य दायरा भित्र खडा हुन्छ, एन्ड्रोइड वन प्रयोग गर्नका लागि धन्यबाद।
यो ए मा पदोन्नति मा उपलब्ध छ 253 .XNUMXeयुरो अमेजनमा। तिमी सक्छौ कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » २०१ of को सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड वन स्मार्टफोनहरू
सुदूर पूर्वबाट आल्केमिस्ट कोड आउँदछ, २०१ of को एशियाई आरपीजीहरू मध्ये एक
Asus ZenFone 5Z Android पाई मा अपडेट गर्न सुरू हुन्छ